Thengisa i-Rivet Yokuxhumana kagesi, iBimetal Rivet, iTrimetal Rivet. i-bimetal rivet Lo oxhumana naye uno-conductivity omuhle kagesi futhi ingaphezulu alinacala ku-oxidization. Ukwengezwa kwe-3 - 28% yethusi kungathuthukisa ngokuphawulekayo ukumelana nelangabi lesiliva.
Ama-rivets aqinile yizinto zokuvala ezihlala njalo ezihlala njalo ezisetshenziswa kwizikhumba zamaphaneli namaphaneli. Ngaphambi kokufaka isicelo, aqukethe nje ishafu ebushelelezi enekhanda eliyindilinga, eliyindilinga kwelinye icala.Sinikeza amaSolid Silver Rivets ethu angabaqhubi bakagesi abahle.
Diliva ngesikhathi, isiqiniseko se-quailty, ukwakheka okuzimele kwesikhunta, impendulo efike ngesikhathi, Esikhundleni sokuhlolwa kwamakhasimende, Ukuhlaziywa kokubunjwa kwe-priduct.
Tri-metal Imininingwane Shanghai ZHJ technologies Co., Ltd.
Ukuzinza kwayo ngogesi kungcono kakhulu kunokuthinta ukuxhumana nomfanekiso wayo ophelele nesimo. Ngokuqhathanisa ne-Welding Contact, inesikhathi esifushane sokushisa nemvelo ehlanzekile.
Ukulingisa kwe-Welding Assembly kunciphisa izindleko kuzo zonke izigaba ezahlukahlukene zokuthuthuka komkhiqizo, njengokuklama, ukuhlela ukukhiqiza, ukuzama ukuphuma, nokuqinisekiswa kwamanga.
Izinkinobho zokuxhumana ze-Bimetal zinganikezwa nge-varitey enkulu yokulungiselela nokuhlanganiswa kwezinto, Izinto zesendlalelo esisebenzayo kungenzeka kube i-Ag, AgCdO noma i-AgNi, uhlangothi lwe-Forthe oluzofakwa ensimbi yensimbi noma i-Cu-Ni alloy ingasetshenziswa, Ubukhulu besendlalelo sokusebenza esiphezulu buphakathi kwengxenye yobukhulu besendlalelo esiphezulu.
Isilili le-cadmium oxide impahla yokuxhumana kagesi isetshenziswa kabanzi, indawo yokuncibilika ephansi yokuxhumana koxhumana nabo be-sublimation ingenza indawo yokupholisa yokuxhumana, futhi ngesikhathi esifanayo icime umphumela, ivimbele ukuvutha koxhumana naye.
Oxhumana naye u-AgSnO2, AgSnO2In2O3 unezinzuzo zobulukhuni obuphakeme, ukumelana okuphezulu ekuhlanganiseni kwe-fusion nokumelana nokushisa njll.
Okuqukethwe yilokho okungcono kakhulu kokuvikelwa kwemvelo ukufaka i-AgCdO
I-SHZHJ ikhiqiza izinhlobonhlobo zokuxhumana namanye amaphrofayli enziwe ngezifiso ezinhlobonhlobo zezinhlelo zokusebenza. Singazifeza izidingo eziningi zezidingo zamandla kagesi aphezulu kanye ne-propulsion system. Noma ngabe kungenxa ye-EMD yakho, i-GE noma i-ALCO locomotive noma amaloli akho ezimayini, udinga umphakeli onokwethenjelwa, i-SHZHJ iyona engcono kakhulu ongayikhetha wena nenkampani yakho.
Oxhumana nabo bensimbi
Sakha ikhwalithi ye-Silver Alloy Wire kuma-Alloys ahlukile afana ne-AgCdo10, AgCdo12, AgNi10, AgNi12, AgSno2 10 njll. Senza nokwenza ngokwezifiso kwalezi zingcingo ze-Silver Alloy njengemininingwane yeklayenti, ukuqinisekisa ukumelana nokugqwala, izinga eliphakeme lokuqhutshwa kokushisa nokushisa kagesi.